Eziningana Kuhle House Izitshalo - China Qingdao Inkosi enhle okusha Izinto
Eziningana Kuhle House Izitshalo
Nakuba zikhona izitshalo eziningi oluhlaza ingafeza umoya ohlanzekile, ukususa ngempumelelo indima ukungcola zasendlini, kodwa izindlu esasisanda kuyilungisa ngaphansi amakhemikhali angcolise, Aloe, Chlorophytum, Sansevieria nezinye izitshalo yilona ephumelela kunazo isiqedaphunga zemvelo.
NASA ososayensi ngemva kweminyaka yocwaningo 20 lwembula ukuthi angu-24 izimo zokukhanya, imbiza Aloe ongaqeda 1 imitha cubic umoya eziqukethwe 90% formaldehyde; amabhodwe Chlorophytum kungaba izitofu, izinto zikagesi, imikhiqizo plastic Ukusatshalaliswa carbon monoxide nitrogen peroxide ugxile sikhathele siyingcuba, kodwa futhi elizenzekelayo off 86% we-formaldehyde, amacembe kanye nezinye amaqabunga amakhulu amahlamvu isitshalo ukubamba kuka 80% yamagesi zasendlini elimazayo. Ngakho-ke, e-15 square metres of egumbini lokuphumula, watshala amabili amabhodwe ka Chlorophytum noma Sansevieria, ungagcina emoyeni opholile, kude formaldehyde umonakalo.
Ngaphezu kwalokho, ivy ukubamba 90% benzene; agave ongasigwinya 70%-benzene, 50% formaldehyde kanye 24% of trichlorethylene; uhlanganyela blue ongasigwinya 96% i-carbon monoxide, 86% formaldehyde. Nakuba kumquat, emhlophe, Mirabilis japonica futhi Haliotis diversicolor kwadingeka ukumelana namandla ukuze hydrogen-fluoride. Wisteria kwadingeka ukumelana namandla ukuze sulphur dioxide, i-chlorine ne-hydrogen-fluoride. Camellia, emhlophe, Milan ngoba chlorine nobuthi obuyingozi kakhulu, abe ukumuncwa futhi inqwaba ethile umthamo; Gardenia, emhlophe, Milan ukubamba zasendlini sulphur dioxide; ezisawolintshi nomoya rosemary zasendlini ungenza amagciwane nezinto ezincane eziphilayo encishisiwe kakhulu.
Ngaphezu okungenhla kumele sibe nemibandela ukukhanya ukubamba amagesi zasendlini eziyingozi ezikulesi simila ezimbizeni izimbali oluhlaza, kukhona ezinye izimbali ebusuku ekuhlanzeni umoya, okuyizinto izinhlobo evame kakhulu yokusebenzisa entendeni ensundu, okufutshane Hlobisa okwesibhakabhaka, umugqa Gaelan , Usuku, izimpande inkomishi emise, uphayinaphu kutshalwa futhi tiger Pilan nokunye. Ngaphezu kwalokho, lolu hlobo isitshalo Ubuye inzuzo sobala kakhulu - zokutshala elula nokugcinwa, okuyinto Kuvame ukuthiwa izimbali "ukulinda ezinhle."